INDLU YETHU-IKHAYA LETHU iYunguilla Valley-nge-A2CC - I-Airbnb
INDLU YETHU-IKHAYA LETHU iYunguilla Valley-nge-A2CC
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguOUR HOME-NUESTRA CASA By/Por A2CC
Indlu enomthamo we-12-13 yabantu abane-jacuzzi, indawo yokuqubha kunye nendawo ye-barbecue, indawo yendalo ye-60 imizuzu ukusuka e-Cuenca enemozulu eshushu kunye ne-landscape egqibeleleyo, ekhoyo ngemini, iveki okanye inyanga ngokulandelelana.
Indlu ye-12-13 abantu, kunye ne-pool, i-spa -jacuzzi ene-bbq echibini, indawo yendalo ehlala kwimizuzu engama-60 ukusuka eCuenca kunye nemozulu ye-subtropical kunye ne-landscape enkulu, ifumaneka ngosuku, ngeveki okanye ngenyanga.
Ukongeza kumagumbi okulala abonisiwe, kukho isihlomelo esinegumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Ukongeza kumagumbi okulala abhalisiweyo, kukho igumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Ukuzola, kuthe cwaka ngombono okhethekileyo weNtlambo yaseYunguilla
Ukuzola, ukuzola kunye nembono ekhethekileyo yeYunguilla Valley
Umbuki zindwendwe ngu- OUR HOME-NUESTRA CASA By/Por A2CC
Njengababuki zindwendwe siyakukhapha ukuhambisa indlu kwaye sibonise ukusebenza kwayo
Njengababuki zindwendwe siya kukhapha ukuhambisa indlu kwaye sibonise ukusebenza kwayo